Myanmar Independence Day Reception 2018 at the Myanmar Permanent Mission to the United Nations, New York – Ministry of Foreign Affairs
Myanmar Independence Day Reception 2018 at the Myanmar Permanent Mission to the United Nations, New York
A reception to commemorate the 70th Anniversary of the Independent Day of the Republic of the Union of Myanmar was held in the evening of 16th March 2018 (Friday) at the Permanent Mission of Myanmar to the United Nations, New York.
Assistant Secretary General for Political Affairs of the United Nations Mr. Miroslav Jenca, permanent representatives, deputy permanent representatives and experts of various missions to the United Nations, representatives from the United Nations agencies and international organizations and invited guests attended the reception.
In the evening of 23rd March 2018 (Friday),areception given to the Myanmar communities residing in tri-states was held at the Permanent Mission of Myanmar and representatives from various organizations and invited guests were present at the occasion.
Following is the remarks of the Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar, H.E. U Hau Do Suan at the reception on 16 March:
On this auspicious occasion of the 70th Anniversary of the Independence Day of the Republic of the Union of Myanmar, it is my great honour to extend our warm welcome and profound gratitude to all distinguished guests present here this evening.
Myanmar has undergone remarkable change and transformation in recent years. It has abandoned five decades of military rule and is striving to ensure that democracy takes firm root. Myanmar is now on the path of transition away from centuries-long legacies of colonial occupation, ethnic rivalries and military rule.
After years of economic stagnation and isolation, the government is rebuilding the economy opening up the country to the world. Political life is being transformed and governance has substantially been improved even while deep-seated ethnic tensions continue to impede quick progress.
The government began revitalizing the peace process immediately after taking office. Significant progress can be seen in spite of some complexities. The Nationwide Ceasefire Agreement was signed by eight ethnic armed groups in 2015. A new milestone in the direction of peace was made last month when two more ethnic armed groups came on board.
Another significant development is the progress made in the two Union Peace Conferences held so far. 37 key principles were agreed upon forafuture democratic union at the second session held last May. The third session is scheduled to be convened at the end of April or early May.
In less than two years of time span, the democratic government has been able to turn initial steps into firm strides, has widened the democratic space and has made progress in the peace process.
Soon after regaining our independence, we joined the United Nations on 19 April 1948 as its 58th member state. Cooperation with the United Nations has been and will continue to be one of the basic tenets of our foreign policy.
Myanmar is addressing the international community’s calls on various aspects of developments in the country with its utmost endeavour. Decades-long challenges such as internal armed conflicts, community discord and underdevelopment cannot be solved overnight. However, we have firm belief that Myanmar will find durable solution to these challenges with trust and participation of the entire people as well as with understanding and cooperation of the international community.
On this jubilant occasion of the 70th Anniversary of the Independence Day of the Republic of the Union of Myanmar, I have the honour to proposeatoast;
to the peace and prosperity of the people of Myanmar,
to the success of the United Nations as well as better mutual understanding and strengthened cooperation among its member states; and
to the well being, happiness and continued success of the honourable guests present here.
နယူးယောက်မြို့၊ မြန်မာအဖွဲ့ရုံး၌ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏
နှစ်(၇၀)ပြည့်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲ ကျင်းပခဲ့ခြင်း
နယူးယောက်မြို့၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဇနီးတို့မှ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်ရှိ အကြီးအကဲများ၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ နယူးယောက်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြားသံတမန်များ၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ အကြီးအကဲများနှင့် တာ၀န်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအား တည်ခင်း ဧည့်ခံသည့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်(၇၀)ပြည့်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲကို ၁၆-၃-၂၀၁၈ရက်နေ့ (သောကြာနေ့) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားသို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား Assistant Secretary-General for Political Affairs ဖြစ်သူ Mr. Miroslav Jenca နှင့်ဇနီးတို့မှ အထူးဧည့်သည်တော် အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးများမှ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒုတိယအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ အဖွဲ့ရုံးများမှ ကျွမ်းကျင်အဆင့်အရာထမ်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ စုံညီစွာ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။
ထို့ပြင် ၂၃-၃-၂၀၁၈ရက်နေ့(သောကြာနေ့)တွင် နယူးယောက်ပြည်နယ်၀န်းကျင်ရှိ မြန်မာ အသိုင်းအဝိုင်း အတွက် နှစ်(၇၀)ပြည့်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် သီးခြားဧည့်ခံပွဲ တစ်ခုကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။
အဆိုပါဧည့်ခံပွဲတွင် အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်း ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ နှစ် (၇၀) ပြည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲကို ကြွရောက်ချီးမြှင့်ကြသော ဧည့်သည်တော်များကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆို ပါကြောင်းနဲ့ အထူး ကျေးဇူးဥပကာရ တင်ရှိပါကြောင်း ဦးစွာ ပြောကြားလိုပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဝါရှင်တန်မြို့ကနေ လာရောက်ချီးမြှင့်ပေးတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးအောင်လင်းနဲ့ဇနီး ဒေါ်ကေသီကြည်ဝင်း၊ မြန်မာစစ်သံမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ချစ်ဆွေနဲ့ဇနီး ဒေါ်နီနီအောင်၊ လက်ထောက်စစ်သံမှူးနဲ့တကွ ရပ်ဝေး၊ ရပ်နီးက တက်ရောက်လာသော မိတ်ဆွေအားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ သူ့ကျွန်ဘဝကလွတ်မြောက်ပြီး အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း(၇၀) ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးများ မျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း၊ တန်းတူညီမျှခြင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကောင်းတွေကို ယနေ့တိုင် အပြည့်အဝ မခံစားနိုင်ကြသေးတာ အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပြည်သူ့အစိုးရဟာ တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ခိုင်မာစွာ အမြစ်တွယ်နိုင်စေရေး အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော (၂)နှစ်တာ အစိုးရသက်တမ်းကာလအတွင်း ပြည်တွင်းမှာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းပြီး၊ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိနိုင်ဖို့ ဉီးစားပေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ဆောင်ရွက်ရာမှာ ခက်ခဲမှုတွေ ကြားထဲက အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်း နောက်ထပ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့နဲ့ တစ်ပြည်လုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် ကို ထပ်မံ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တဲ့အတွက် ယခုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း(၁၀)ဖွဲ့နဲ့ အင်စီအေ လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအပြင် ယခုအချိန်အထိ ကျင်းပခဲ့ပြီးစီးခဲ့တဲ့ ပထမအကြိမ်နဲ့ ဒုတိယအကြိမ် (၂၁)ရာစုပင်လုံ-ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံများအတွင်းမှာလည်း သိသာ ထင်ရှားတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ရရှိခဲ့ ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလအတွင်းက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ညီလာခံမှာ အနာဂတ် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေတစ် ပြည်ထောင်စုအတွက် အဓိကကျတဲ့ အခြေခံမူ ၃၇ ချက်ကို သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကို ယခုနှစ် ဧပြီလနှောင်းပိုင်း ဒါမှမဟုတ် မေလ အစောပိုင်းမှာ ကျင်းပသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ အခြေခံကောင်းတွေကို တည်ဆောက်နိုင် ခဲ့ပါတယ်။ အေဒီဘီရဲ့ တွက်ချက်မှုအရ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂျီဒီပီဟာ ၂၀၁၇ မှာ ၇.၇ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၂၀၁၈မှာ ၈.၀ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီး တိုးတက်ရန်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာ ဂျီဒီပီတိုးနှုန်း အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေသစ် ပြဌာန်းနိုင်ခြင်း၊ ငွေလဲနှုန်းကို တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကျဆင်းလာခြင်း၊ အနည်းဆုံးလုပ်ခ တိုးမြှင့်သတ်မှတ် နိုင်ခြင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆက်တိုက် တိုးတက်လာခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းစတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာ သိသာစွာ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာခြင်းစတာတွေဟာ ကောင်းမွန် တဲ့ စီးပွားရေး အခြေခံကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အတူ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးစတဲ့လူမှုရေးပိုင်းမှာ ဘတ်ဂျက်တွေ တိုးမြှင့်ချထားပြီး ဘက်စုံမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
တရားရေးမဏ္ဍိုင်ခိုင်မာရေး၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စတဲ့အရေးကြီးတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တွေမှာလည်း အတန်အသင့် ခရီးရောက်နေပြီလို့ပြောရမှာ ဖြစ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ တိုးတက် အောင်မြင်မှုများ ရရှိနေတာနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့လဲ ရင်ဆိုင်နေရ ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု များမှာ ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာ များစွာ ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု၊ ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းရေးဟာလဲ ဆက်လက်အားထုတ် ဆောင်ရွက်ရမဲ့ အရေးကြီး သော နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရအတွက်သာမက တစ်မျိုးသားလုံးအတွက် အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကတော့ ရခိုင် ပြည်နယ်ရှိ မူဆလင်များအရေးကိစ္စဘဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာ နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာ မထိပါးစေရေး၊ မိမိပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေး နဲ့ လူနေမှုဘဝ အာမခံချက်ရှိရေး၊ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ပုံရိပ်မထိခိုက်စေရေးနဲ့ ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ ရေရှည်တည်တန့်မဲ့ နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် အထူးသတိပြုပြီး အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းကိုလည်း အသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ငြိမ်းချမ်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ စစ်မှန်သောဒီမိုရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခြေအနေအချိန်ကာလတစ်ရပ်ကို ရောက်ရှိ နေတယ်လို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ အခွင့်အလမ်းကောင်းများစွာနဲ့အတူ ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှုများ ကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီလိုမြန်မာ့သမိုင်းမှာ အရေးကြီးလှတဲ့ အချိုးအကွေ့တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းရတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးက ချစ်ခင်လေးစားပြီး၊ ယုံကြည်အားထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဲ့သို့သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦး ရရှိလိုက်ခြင်းဟာ တကယ်တော့ နှစ်ပေါင်း(၇၀) မှာ တစ်ကြိမ်သာ ရရှိတဲ့ ရှားပါးလှတဲ့အခွင့်ထူးတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလိုထူးခြားတန်ဖိုးရှိလှတဲ့ အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲ မြန်မာပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး အနေနဲ့ ကိုယ့်ပါတီအကျိုး၊ ကိုယ့်လူမျိုးစုအကျိုးနဲ့ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရဲ့ အကျိုးစီးပွား တစ်ခုတည်းကိုသာ ဉီးစားမပေးဘဲ၊ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှန်းပဋိပက္ခ ချုပ်ငြိမ်း၍၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဂုဏ်တင့်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်ရေးအတွက် အားလုံးက စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် အတူတကွ ဝိုင်းဝန်းပြီး လက်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်။
ယခုလို မင်္ဂလာရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ နှစ် (၇၀) ပြည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားမှာ –
မြန်မာပြည်သူအားလုံးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု အမြန်ဆုံးအောင်မြင်နိုင်ရေး အတွက် လည်းကောင်း၊
ယနေ့ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဧည့်သည်တော်များ ကာယသုခ၊ စိတ္တသုခနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ယခုထက် ပိုမို တိုးတက်အောင်မြင်ရေး အတွက်လည်းကောင်း
ကျွန်တော်နဲ့အတူ ဆုမွန်ကောင်းများ တောင်းကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။